Sidee Guryaha Degganaanshaha Loo Noqon Karo Nolashadan Dhallin-yaraha ah
Beacon Interfaith Housing Collaborative wuxuu ka kooban yahay 80+ kulumo u heellan si loo dhammeeyo hoyla'aanta guryaha, barnaamijka hoyga ee Moving Forward, iyo u doodista dadweynaha. Beacon guryaha ayaa 775 qof oo deggen ku noolyihiin noloshooda, iyaga oo aan ka walwalsaneyn inay helaan guri. Dadaalka McKnight ee kor u qaadaya guryaha la awoodi karo iyo nidaamyada kordhiya degganaanta qoyska, Beacon wuxuu helayaa taageero guud oo ah shaqadooda si ay u siiyaan dhammaan guryaha.
Sydney waxay u timid Beacon siyaabaha qaar sida dhalinyarada caadiga ah. Waxay ka qalinjabisay dugsiga sare. Waxay ahayd inay badbaadiso baabuur, waxayna sugeysaa xilli cusub "Orange waa New Black." Siyaabo kale, Sydney waa wax kasta oo caadi ah. Waxay ku jirtey iyada oo qiyaastii laba sano ah, iyada oo gurigeeda ka tagtay sababtoo ah xasilooni darro. Waxay ku jirtay laba barnaamij oo hoy-dhalinyaro ah, ugu dambeyntii muddo 11 bilood ah intii ay sugayeen inay ku soo biiraan Nicollet Square, oo ah guryo guryo leh oo lagu taageerayo adeegyada dhallinyarada da'doodu u dhaxayso 16-21 kuwaas oo la kulmay hoy la'aan ama ka baxaya nidaamka daryeelka korinta.
"Waan ku faanayaa inaan isku daryeesto oo aan sameeyo waxa aan u baahanahay inaan sameeyo. Laakiin halkan, waxaa jira dad caawiya markaad u baahatid. " -SYDNEY
Heshiiska kirada iyo bixinta kirada waa tallaabo weyn oo loogu talagalay Sydney. "Xaqiiqdii waan jeclahay. Waxay kaa dhigaysaa in ay noloshu noqon laheyd haddii aad haysato aqal gaar ah, "ayay tiri. Sydney waxay si dhakhso ah u heshay tababar ku jirta Butter Bakery Café, ka dibna waxaa loo shaqaalaysiiyay si joogto ah sida barista iyo dukaanka. Waxay sidoo kale u shaqaysaa sida dukaanka Walmart. Kharashkeeda waxaa ka mid ah ijaarka ($ 205 bishiiba sanadka koowaad), taleefankeeda, iyo kaadhka baska. Waxay baabi'isay hugaamkeeda Hulu iyo Netflix si ay u gooyaan kharashyada oo ay ku faanaan in ay bixiso kirada kahor taariikhda la filayo. Hadafkeeda muddada-gaaban waa in lagu badbaadiyo gaariga. Hase yeeshee Sydney waxay sidoo kale diiradda saareysaa hadafkeeda muddada-dheer si loo noqdo kalkaalisada. "Waxaan rabaa inaan noqdo RN aan ahay socda si ay u noqoto RN, "si dhakhso ah ayay u saxeysaa nafteeda. Inta badan, waxay leedahay aragti nolosheeda ah oo aan ku jirin noloshii mushaarka ee jeegga, oo ay ku dhibtoonayso in ay helaan sida dad badan oo ay ku ogaato inay qabanayaan. "Waxan doonayaa wax ka weyn iyo ka wanaagsan," ayay tiri. Thanks to Nicollet Square waxay ka heshay meel ay ku bartaan oo koraan.